Iresiphi yeCowberry Sorbet
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Iibhere Lingonberry
Isiqhamo sesityalo esiqingqiweyo seSerbe, kunye ne-sorbet (i-sorbet yesi-french) yidrozitha ekhuniweyo, elungiselelwe ngesitshixo okanye i-juice yeberry / iifatates ezifihliweyo kunye nesiraphu yeswekile. Esikhundleni sezityalo kunye namajikijolo njengesizalisi, unokusebenzisa iwayini okanye i-champagne. EYiputa naseTurkey, ezimbini iintlobo zeedyert zaziwa: i-Sherbet yokuqala (i-erbe yokutyelela - "isiselo") - uhlobo oluthile lweziphuzo ezinxilisayo kunye nokudibanisa izithelo zeriphu, ishukela kunye neziqholo; kunye neyesibini iSherbet (ukuthambeka kwempuma) yintlaba enemibala emnandi kwi-fruit-and-milk basis. EYurophu, lo mhlobiso ovela eTurkey waza wabonakala etafileni zobukhosi baseFransi ngexesha lolawulo lukaHenry II kwikhondo le-16. Kwiinkulungwane ezili-16-17. I-sorb yesiFrentshi yayisiphuzo samanzi, iswekile kunye nemon. Ngenkulungwane ye-19 kuphela, phantsi kwegama elithi sorbet, i-dessert enqambileyo yaqala ukukhonzwa, apho utywala wayedla ngokuphindaphindiweyo, kodwa kwakusanxila kwiincinci ezincinci kunokuba i-spruce. Ezi zinto zivumbabisayo (sibonga i-cowberry), i-dessert enqabileyo nepholile inomdla ukukhonza kwisitya sokutya eshushu. Kuqhelekile ukuba sikhonze i-sorbet ngexesha lesidlo sakusihlwa phakathi kokutshintsha izitya ukuze uhlaziywe.
Cowberry 400 g
Ubusi 1 tbsp. l.
Ijusi ye-lemon 1 tbsp. l.
Amanzi abilisiwe 1 tbsp.
Inyathelo 1 Ukulungiselela le dessert, sidinga: iikomityi ezintathu ze-cowberry, ubusi, ijusi yamanzi kunye namanzi.
Inyathelo 2 Ukuqala, lungiselela isiraphu yobusi: uthele iglasi yamanzi epanini, ulibeke emlilweni. Yongeza i-spoonful yeyuni kunye nejusi yamayim - kakuhle ngokufudumele kuze kube yinkwenkwe inqumla ngokupheleleyo (musa ukubilisa!). Khuphela isiraphu. Ukuba uthanda ukunambitheka ngakumbi kwenkomo yobusi, faka enye isipuni.
Inyathelo 3 Iingqolowa zithatha, zihlambulule uze uthele kumxube - ukusuka kumajikijolo okufuneka wenze i-puree ehambelanayo.
Isinyathelo 4 Thela i-puree yeberry kwisitya esisodwa.
Inyathelo 5 Thela isiraphu edibeneyo kwi-tibatata edibeneyo kwaye udibanise.
Isinyathelo 6 Ubungakanani berry kufuneka bufakwe kwisitya kwaye uthunyelwe kwifriji ngeeyure ezingama-2.
Inyathelo lesi-7 Emva kweeyure ezi-2, xuba i-puree ye-berry ukuze iinqununu zabantu zibekwe ngaphantsi kwaye amazambane adibeneyo ahambelana. Emva koko faka isitya kwifriji kwakhona, emva kweyure, ufumane amazambane ahlambulukileyo uze udibanise de iifatate ezigcotyiweyo zibukeke njenge-ayisikrimu. Unokudinga iiyure ezingama-3-4 kule nto.
Isinyathelo 8 I-sorbet eyona nto ibhetele kakhulu ekukhonzeni iikeramaks.
Patties nge cranberries
I-biscuit roll ne-cowberry soufflé
I-Veal kwi-marinade ye-cranberry-onion
Kwenzeka ngokukhawuleza ukuphilisa intlungu emlonyeni ekhaya?
Indlela yokwandisa ubungqina
Iindlela zonyango zonyango lwe-arthrosis yamadolo
Ngaba unokufunda ngokukhawuleza ukudanisa i-hip-hop?
Isaladi "Iimvumba ezithandekayo"
I-cottage cheese casserole kunye namakhambi
I-gastritis eqhelekileyo kumntwana, yintoni oyenzayo?
Isikhumba sengxaki: i-orange peel
Iityuwa zetyuwa, ingozi okanye inzuzo
Iinjongo kunye neenjongo zesondlo esifanelekileyo
I-Smart down jacket - umthambo-2017-18: yintoni na, kutheni uyayidinga, indlela yokuwugqoka ngayo
Isobho lomgquba kunye ne-chestnuts
Iibhonsi kunye ne-Pesto sauce
Simple creme brulee